काठमाडौं।आगमन सञ्चार प्रालिद्वारा सञ्चालित आगमनखबर डट्कम (www.aagmankhabar.com) आजदेखि दोर्सो वर्षमा प्रवेश गरेको छ । यस अवसरमा हामी सबैभन्दा पहिला हाम्रा आमपाठक, लेखक, स्तम्भकार, शुभचिन्तकप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
तपाईंहरूले आगमनखबरप्रति दर्शाएको माया, दिएका प्रतिक्रिया र गरेका खबरदारीले आज हामी यो स्थानमा छौं । तथ्यमा आधारित सही र सन्तुलित सामग्री तपाईंहरूसमक्ष पुर्‍याउने हाम्रो यात्रा अविचलित रहनेछ ।
‘सत्य सुचानाको खानी’ भन्ने नारासहित गत वर्षदेखी हामीले आगमनखबर डट्कमको यात्रा शुरू गरेका हौं । काम गर्ने क्रममा कतिपय कमजोरी भए होलान्, गत वर्षको अवधिमा सही सूचना दिन सफल रह्यौं भन्ने विश्वास छ ।
यतिबेला कोरोनाभाइरस (कोभिड १९) का कारण सिंगो विश्व गहिरो संकटमा छ । यो रोगका कारण धेरैको ज्यान गयो । लाखौं संक्रमित छन् । दशकौंदेखि प्रकाशित हुँदै आएका पत्रपत्रिका बन्द गरेको समयमा पनि जनताको सूचनाको तिर्खा मेटाउन हामी निरन्तर प्रयत्नरत छौं ।
विश्वले कल्पना नगरेको अहिलेको महासंकटको समयमा डिजिटल पत्रिका (न्यूज पोर्टल) को भूमिका झनै प्रभावकारी भएको हामीले महसूस गरेका छौं । कोरोनाभाइरसले ज्यान गुमाउनेको पीडा एकातिर होला, बाँच्नेको पीडा झनै भयाभह बन्दैछ । यो रोगका कारण विश्व अर्थतन्त्र भयानक संकटमा फसेको छ ।
पक्कै पनि त्यसबाट नेपाल र हामीजस्ता मिडिया अछुतो हुने कुरा भएन । जस्तोसुकै कष्टप्रद स्थितिमा पनि सुसूचित हुन पाउने जनताको अधिकारको रक्षाका लागि हाम्रो उपिस्थति डगमगाउने छैन ।यतिबेला टिक्नु पनि ठूलो विषय हुनेछ । हामी संकटमा पनि सही, स्थलगत, खोज र विश्लेषणात्मक सामग्रीको सम्प्रेषणमा अविचलित रहने छौं ।
दोर्सो वर्ष प्रवेशको अवसरमा हामी पुनः प्रतिबद्धता जनाउँछौं– लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, विधिको शासन र जनताको सुशासनको चाहनामा कसैसँग सम्झौता हुने छैन । तपाईंहरूलाई सुसूचित गर्न हामी तपाईंको घरमै आउनेछौं । घरमा इन्टरनेट सुविधा छ भने आगमनखबर डट्कम हेर्नुहोस्, देश विदेशमा भैरहेका सूचनाबाट वञ्चित रहनुपर्ने छैन ।
श्रीलंकाले जस्तो आर्थिक अभाव नेपालले खेप्न नपरोस् !
सरकारले राम्रोसँग काम गर्न पाओस, अवरोध नआओस !
प्रधानमन्त्रीको आत्मबल : हिजो आज र भोलि !
अब कांग्रेसलाई काम गर्न देउ !
सरकारमा जान कांग्रेसलाई “ग्रीन सिग्नल”
सर्वोच्चमा सरकारी वकिलको नाटकीय तर्क